IINKCUKACHA EZI-3 ZOKUJIKISHA IZIBHODI ZEBHODI YEKHADI - IKHRISIMAS EYODWA | Imisebenzi yezandla
UIrene Gil | | Imisebenzi yeekhadibhodi, Imisebenzi yezandla yeKrisimesi, Ukusetyenziswa kwakhona
Kule nto tutorial Ndiza kukufundisa Iingcamango ze-3 ukuze uphinde usebenzise i Iityhubhu zekhadibhodi iphepha langasese, iphepha lasekhitshini, isongelo seplastiki, iteyiphu yokuncamathela ... kwaye uzijike zibe zizihombiso ezintle ze IKrismesi.
1.1 Amakhonkco e-napkin
1.2 Ipeyinti yekrisimesi efriziweyo
1.3 Indlu yeKrisimesi
2.1 Amakhonkco e-napkin
2.2 Ipeyinti yekrisimesi efriziweyo
2.3 Indlu yeKrisimesi
Ukwenza imisebenzi yobugcisa emithathu uya kuyidinga njengento eqhelekileyo Iityhubhu zekhadibhodi, kodwa siza kusebenzisa enye izinto ngokuthe ngqo kumbono ngamnye.
Ukuhonjiswa kweKrisimesi njengamaqhwa ekhephu, i-mistletoe, ii-acorn, iipincones ezincinci ...
Ipeyinti yekrisimesi efriziweyo
Ipeyinti emhlophe, ebomvu, emnyama kunye negolide ye-acrylic
Ibhola ebomvu okanye ipom ebomvu
Irabha ebomvu okanye ikhadibhodi ebomvu
ISETYHULA ukubhola umatshini
Ikhadibhodi yomthi weKrisimesi ukuhombisa izindlu ezincinci
Kwi elandelayo uqeqesho lwevidiyo uyayibona inkqubo yokucacisa kuluvo ngalunye ngokurisayikilisha kwakhona Iityhubhu zekhadibhodi. Baye kakhulu lula kunye neziphumo ezilungileyo kakhulu. Uyakhawuleza ukuyenza, ukuze ukuba ngomzuzu wokugqibela ubonakale ulungile ukuthenga okanye ukwenza izihombiso, ungaya kwezi zimvo kwezoqoqosho.
Ungalibali nawaphi na amanyathelo ukuze uzenzele izihombiso ngokwakho. Ngenxa yoko ndicacisa apha ngezantsi ngendlela elula yokwenza imisebenzi emithathu yobugcisa ke awunangxaki.
Ukwenza amakhonkco e-napkin kufuneka usike ityhubhu yekhadibhodi ukusuka kwincinci encinci isiqingatha, ukusuka apho unokufumana amakhonkco amabini e-napkin. Cola i ibhendi kwikhadibhodi kwaye uyirhangqe yonke ngayo. Nje ukuba ityhubhu igqunyiwe, bopha a bopha ngenye iribhoni okanye intambo yombala owahlukileyo ukuyenza ibonakale. Embindini weluphu ungayibamba umhombiso ukuba ukhethe. Ndikhethile enye iiacorn kunye nenye iqhwa leplanga.
Ubuhle balohombiso kukuwenza ube nefuthe Iqabaka, Kwaye siza kuphumelela nge ubumenyemenye obumhlophe. Kuqala kufuneka usike ikhadibhodi 8 iziqwenga malunga 1cm ububanzi. Cinezela iziphelo ezibini zekhadibhodi encinci kwaye uya kwenza ubume obufana no amagqabi. Glue 4 kunye kwelinye icala kwaye wenze ifom cruz. Ezinye ezishiyekileyo uzincamathisele phakathi kwezo zingaphambili.
Sika abanye izangqa ezine kodwa ke ngeli xesha zivule, kuba into ekufuneka uyenzile kukuzisonga njengenkumba ukwenza ifayile ye- spiral. Loo moya kufuneka uncanyathiselwe kwisangqa sokuqala osincamathisileyo.
Yipeyinte kunye spray, ukhululeke ngakumbi kunebrashi. Ndisebenzise dorado kodwa ijongeka intle kakhulu kwi mhlophe. Xa ipeyinti yomile, sebenzisa kakhulu Iglue emhlophe ngobunye bobuso kwaye usasaze khazimla. Xa isomile, ukuba mhlophe njenge-glitter kuyakuvela ukuba umhombiso unayo Iqabaka bonke obo buso.
La indlu encinci Yeyona ithatha eyona inde, kodwa isekhona kakhulu kulula.
Ipeyinti ikhadibhodi ityhubhu ngombala obomvu. Sika a isangqa yenziwe ngerabha ye-eva okanye ikhadibhodi ebomvu kwaye upeyinte umda wonke kunye neminye imigca ngokungathi yi umnyango wamaplanga. Glue isangqa kwityhubhu. Ukwenza ifayile uphahla usike uxande lwekhadibhodi uze uyipeyinte mhlophe. Ukwenza umphumo onxibileyo unike ukuthintela abamnyama ngebrashi eyomileyo ngobumnene kakhulu, kwaye ukuba ufuna ukufiphaza ngakumbi ukurabha kancinci ngethishu okanye iphepha. Glulela uphahla phezu kwetyhubhu ebomvu.
Ukugquma umngxuma phakathi kophahla nendlu, namathela ezinye amagqabi angengowamvelo, kwaye ukongeza iinkcukacha sebenzisa ezinye izangqa abicah embindini uze uyipeyinte dorado. Yincamathisele ibhola ebomvu okanye pompom.
Faka isicelo Ipeyinti emhlophe Kumazantsi endlu ukulinganisa nieve. Kwaye ukuba wenza umngxuma eluphahleni kwaye udlula umsonto kuwo, unokuwuxhoma kwi Umthi weKrismesi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Imisebenzi yezandla » Imisebenzi yezandla » Ukusetyenziswa kwakhona » Iimbono ezi-3 zokuphinda usebenzise kwakhona iityhubhu zekhadibhodi kunye nokwenza izihombiso zeKrisimesi
Yenza i kettledrum yakho eyenziwe ekhaya, usebenzisa imbiza yodongwe